Xasuus Abaartii Dabadheer 1974 | Xaqiiqonews
Xasuus Abaartii Dabadheer 1974
Qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa dib usoo nooleeyey xasuustii abaartii ku dhufatay gobolada Togdheer, Sanaag, Sool,Bari,Nugaal iyo qaar ka mid ah gobolada dhexe abaartaasi oo markii dambe caan ku noqotay “dabadheer”
XAQIIQO NEWS – MUUQAAL
Xasuusta dabadheer waxa ay timid markii dad ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed Ee Soomaaliya oo ku noolaa magaalo madaxda Sool ee Laascaanood laga soo tarxiilay ogeysiis la’aan.
Subaxnimadii hore ee sabtida maamulka Soomaaliland ayaa qabqabtay dadka ka soo jeeda koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasi ku noolaa kana shaqeysan jiray magaalada Laascaanood, waxaana dadka la raafay qasab lagu saaray gawaari xamuul ah.
Wariyihii hore BBC Cabdrisaaq Catoosh ayaa boggiisa faysbuug ku baahiiyey qoraal uu ku sheegay in dadka Laascaanood laga tarxiilay qabiil ahaan iyo lahjad ahaan loo beegsaday.
Sawirro laga soo qaaday dadka laga tarxiilay Laascaanood
Qaar ka mid ah dadkii ka falceliyey sawirrada raafka ah ee la faafiyey ayaa baahiyey sawirrada abaartii dabadheer iyaga oo is weydiiyey abaalkii reer Waqooyiga loogu galay gobolada koonfureed.
Sanadihii 1973-kii, 1974-kii iyo 1975-kii waxaa qaar ka mid ah goboladii Waqooyiga Soomaaliya ku dhuftay abaar sida magaceeda ka muuqata aheyd abaartii ugu dheereyd ee inta la ogyahay ku dhufatay dalka Soomaaliya.
Dowladii kacaanka oo ka jawaabeysay mushkiladda abaarta ayaa diyaarado ku soo daabushay dadkii abaartu ku dhufatay iyaga oo dib u dejin loogu sameeyey gobolada kala ah, Shabeelaha Dhexe, Shabeelaha Hoose iyo Jubbada Dhexe, waxa ayna soo dhaweyn kala kulmeen dadkii halkaasi daganaa.